Tababarihii laga ceyriyay Inter Milan Roberto Mancini oo durba laga yaabo inuu ka shaqo galo… – Gool FM
Tababarihii laga ceyriyay Inter Milan Roberto Mancini oo durba laga yaabo inuu ka shaqo galo…
(Milano) 08 Agoosto 2016. Tababaraha dhawaan laga ceyriyay xilka tababaranimo ee naadiga Inter Milan ee dalka Talyaaniga Roberto Mancini ayaa la warinayaa inuu waayihiisa macallinimo uu ka sii wadan karayo horyaalka Shiinaha.
Macallinka reer Holland Frank de Boer ayaa la filayaa inuu caawa soo gaaro Talyaaniga si uu u dhammeystiro heshiiska uu ku badelayo tababaraha reer Talyaani ee saakay la xaqiijiyay inuu kooxda ka tagay.
Bar-dhammaadka xiga ee Roberto Mancini ayaa noqon karaya Aasiyada fog iyadoo ay eeganayaan kooxo badan oo ka dhisan horyaalka Shiinaha sida uu sheegayo website-ka Gianluca Di Marzio.
Fabio Cannavaro iyo Ciro Ferrara ayaa kol horeba ka shaqeeyay horyaalka Superleague ee dalka Shiinaha, halka tababarihii hore ee xulka Azzurri Marcello Lippi uu ku guuleystay Asian Champions League intii uu xilka u hayay Guangzhou Evergrande.
Kingsley Coman oo diidan inuu dib ugu laabto kooxda Juventus